Astaamaha Hydroponics, Adeegsiga, iyo Faa'iidooyinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Waxaa jira habab kale oo lagu beero dhir aan ka ahayn carrada beeraha, beero, iyo dheryo. Waxay ku saabsan tahay dalagyada hydroponic.
1 Waa maxay hydroponics?
2 Astaamaha Hydroponics
3 Hydroponics ayaa adeegsada
4 Kala soocida iyo faa'iidooyinka ay bixiyaan hydroponics
5 Adeegsiga haamaha
Waa maxay hydroponics?
Hydroponics waa hab ka kooban adeegsiga xalka dhirta sii kordheysa halkii laga isticmaali lahaa carrada. Waxaa jira siyaabo badan oo loo adeegsado farsamadan waana mid waxtar badan. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaatid waxa ku saabsan biyo-dhalinta?
Markaan u adeegsano farsamadan abuurka, xididada waxay helayaan xal hodan ku ah nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah inay koraan iyo isku dheelitirka isku dheelitiran ee biyaha ku milma. Intaa waxaa dheer, xalkaani wuxuu leeyahay dhammaan walxaha kiimikada lagama maarmaanka u ah horumarka wanaagsan ee geedka. Sidaas darteed, geedka wuxuu ku kori karaa xalka macdanta kaliya, ama meel dhexdhexaad ah, sida quruurux, luul ama ciid.
Farsamadan ayaa la ogaaday qarnigii XNUMXaad markii saynisyahannadu arkeen in macdanta lagama maarmaanka ah ay geedaha ka nuugaan iyada oo loo marayo ion-yo aan dabiici ahayn oo ku milmay biyaha. Xaaladaha dabiiciga ah, carrada waxay u dhaqantaa sidii keyd nafaqeyn oo macdan ah, laakiin carrada lafteedu muhiim maaha geedka inuu baxo. Marka nafaqooyinka macdanta ee ciidda ku milmaan biyaha, xididdada geedka ayaa awood u leh inay nuugaan.
Sababtoo ah dhirtu waxay awood u leedahay inay ku darsato nafaqooyinka xalka, substrate looma baahna geedka inuu horumariyo oo koro. Ku dhowaad geed kasta ayaa lagu kori karaa iyadoo la adeegsanayo farsamada hydroponic, in kasta oo ay jiraan qaar si fudud oo natiijooyin fiican uga fiican kuwa kale.
Hydroponics ayaa adeegsada
Maanta, waxqabadkani wuxuu gaadhayaa horumar weyn waddamada ay xaaladaha beeraha ku liitaan. Isku darka hydroponics iyo maaraynta aqalka dhirta lagu koriyo wanaagsan, waxsoosaarka ayaa aad uga sarreeya kan laga helo dalagyada hawada furan.
Sidan oo kale, waxaan ka dhigi karnaa khudaarta si dhakhso leh inay u koraan oo aan siino cunno nafaqooyin badan leh. Farsamada hydroponics waa wax fudud, nadiif ah oo aan qaali ahayn, marka beeraha yar-yar, tani waa khayraad soo jiidasho leh.
Xitaa waxay gaadhay heerar ganacsi iyo in cuntooyinka qaar, waxyaabaha la isku qurxiyo iyo dhirta yar yar ee tubaakada lagu beero habkan sababo kala duwan awgood oo la xiriira la'aanta carro ku filan.
Maanta waxaa jira aagag badan oo leh carro wasakhaysan daadinta ama noolaha keena cudurrada dhirta ama isticmaalaya biyaha dhulka hoostiisa mara ee hoos u dhiga tayada carrada. Sidaas darteed, beerashada hydroponic waxay xal u tahay dhibaatooyinka ka jira dhulka wasakhaysan.
Marka aynaan u isticmaalin carrada meel ay ka baxdo, ma hayno saamaynta keydka ee carrada beeraha ay bixiso. Si kastaba ha noqotee, waxay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan oksijiinta xididdada mana aha wax loogu yeeri karo nadiif xagga miisaanka ganacsiga.
Waxaa jira dad badan oo isticmaala hydroponics. Dadka waqtiga firaaqada leh ee raba inay madadaaliyaan oo ay baaraan, cilmi baaris, mudaaharaad ardayda loo sameeyo oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay walxaha kiimikada qaarkood, xitaa kuwa doonaya inay ku koraan weel ama tubbo yar, si ay ugu koraan meelaha bannaan ama kuwa waaweyn dalagyada.
Kala soocida iyo faa'iidooyinka ay bixiyaan hydroponics
Dalagyada Hydroponic ayaa dhowaan isbeddelay marka loo eego qaababka loo isticmaalo iyo saameynta deegaanka ee ay ku leedahay. Dhinac, waxaan ka helaynaa qaababka furid, kuwaas oo ah kuwa daadiya wasakhda, dhinaca kalena, waxaan leenahay kuwa xiran, taas oo dib u isticmaasha xalka nafaqada oo ah nooc ka mid ah ilaalinta deegaanka iyo dhaqaalo badan isticmaalkeeda.
Hydroponics waxay ka fogaataa caqabadaha iyo xaddidaadaha ay soo bandhigto carrada caadiga ah ee beeraha. Carrada beeraha waxay u baahan yihiin substrate, maaddada adag, doogga, Bacriminta, sunta cayayaanka, iwm.
Hydroponics waxay lahaan kartaa substrate aan shaqeynayn haddii la doono, sida perlite, bambo, peat, quruurux, IWM
Nidaamyada biyo-mareenka ayaa markii hore ka mid ahaa nooca "furan", maaddaama saameynta deegaanka ee soo-saarista dareerayaasha loo isticmaalay beerashada aan tixgelin la siinin. Markay arkeen saamaynta daadinta xalka deegaanka, hababka 'xidhan' ayaa la sameeyay. Habkani wuxuu ku saleysan yahay dib-u-adeegsiga nafaqooyinka dalagyada kale, iyadoo laga fogaanayo wax-soo-saarkii deegaanka.
Hydroponics waxay bixisaa faa'iidooyin badan dalagyada caadiga ah:
Waxay u oggolaaneysaa inay ku koraan gudaha (balakoonnada, barxadaha, barxadaha, iwm.)
Waxay u baahan tahay meel yar (rakibitaan isku dhafan ayaa la samayn karaa si loo sii kordhiyo booska)
Xilliga abuurka ayaa ka gaaban kan beeraha dhaqameed, maadaama xididdadu ay xiriir toos ah la leeyihiin nafaqooyinka, gaaritaanka koritaanka aan caadiga ahayn ee jirridaha, caleemaha iyo miraha.
Waxay u baahan tahay shaqo yar, maadaama aysan daruuri ahayn in dhulka la shaqeeyo (carrada laga qaado, la beero, la nadiifiyo dalagyada, iwm.)
Dhibaato malahan nabaad-guurka carrada, sida dalagyada dhaqanka
Muhiim ma aha in la isticmaalo bacriminta, sidaa darteed khudaarta la soo saaray waa 100% dabiici ah.
Xaqiiqda ah uma baahna bacrimin waa faa iido weyn xaga saamaynta deegaanka. Sidaan ognahay, isticmaalka xad dhaafka ah ee bacriminta nitrogen waa sababaha ugu waaweyn ee eutrophication-ka biyaha iyo wasakhaynta biyaha dhulka hoostiisa. Anaga oo iska ilaalinayna adeegsiga Bacriminta waxaan yareyneynaa saameynta xun ee deegaanka.
Dhawaan, adeegsiga konteynarrada ee nidaamka hydroponics ayaa la soo jeediyay. Iyadoo ay weheliso waxsoosaarkii "aad u sarreeyay", adeegsiga weelasha ku jira hydroponics waxay xaqiijineysaa in dhammaan nidaamyada koraya ay sidoo kale waxay isticmaali doonaan 90% biyo ka yar inta loo isticmaalo beeraha caadiga ah.
Markaad isticmaaleyso hydroponics-ka weelka ku jira, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in biyuhu ay isla goobtaas marayaan laba iyo tobankii daqiiqaba. Sidan ayaan dalagyada uga dhigaynaa beer la qaadan karo.
Haddii aan xisaabinno, innagoo isticmaaleyna biyo-biyoodka, waa la goyn karaa qiyaastii 4.000 ilaa 6.000 cutub qudaar toddobaadle ah (taas oo u dhiganta qiyaastii 50 tan sanadkii), oo u dhiganta 80 jeer tirada unugyada lagu gaaro isla goobta iyadoo la adeegsanayo nidaamyada caadiga ee abuurka iyo goosashada ee beeraha.
Sidaad u aragto, hydroponics waa farsamo sii kordheysa oo baahsan, maaddaama aysan u baahnayn dhul-beereed ayna hagaajiso kheyraadka iyo booska. Haddii aan fidinno hydroponics, waxaan nasiino siin doonnaa carrada beeraha ee sida aadka ah cadaadiska uga haysta bacriminta xad-dhaafka ah, qaaqyada, doogga iyo dawooyinka kale ee kiimikada ah ee la isticmaalay, iyadoo gacan ka geysaneysa yareynta wasakheynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Hydroponics
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado nooca nafaqooyinka ay dhirtu sido iyo meesha laga iibsado.
Xagee ka iibsan kartaa tuubooyinka pvc-ka laba jibbaaran si aad awood ugu yeelatid inaad kubilaabatid ama aad kudaweyso hydroponics si loogu isticmaalo qoyska argenrin?